Yakavanzika Policy | Crypto Gator | Iyo Yakanakisa Cryptocurrency, Blockchain uye Forex Nhau Aggregator
Crypto Gator | Iyo Yakanakisa Cryptocurrency, Blockchain uye Forex Nhau Aggregator
Iyo Yakanakisa Cryptocurrency, Blockchain uye Forex Nhau Aggregator
Cryptocurrency uye Forex Nhau
Zviwanikwa & maGuides
Automated Forex Trading Signal - Mira kamwe uye tengesa pane autopilot kuti uwane mari yekungoita
Dzidza Zvakawanda Nezve Cryptocurrencies
Kutengesa Cryptocurrencies Senge Pro
Tora Zvibereko Zvakakwirira pane Yako Cryptocurrency Pfuma
Chengetedza Yako Cryptocurrency Kutengesa
Kuchengeta Yako Crypto Yakachengeteka
Webhu Kubata Services
Arts & Crafts Chitoro
Ndivanaani isu uye yedu Yakavanzika Policy
Webhusaiti yedu kero ndeiyi: https://cryptogator.co.
Ndezvipi zvatinoziva isu zvatinounganidza uye nei tichizviunganidza
Apo vashanyi vanosiya zvinyorwa panzvimbo iyi yatinounganidza nhamba inoratidzirwa mupepanhau remashoko, uyewo kero yeIndaneti yevakashanyi uye mushandisi weshandisi yejeri yevashanisi kuti vabatsire kuparidzirwa kwepamu.
Kana iwe ukakanda mifananidzo kune webhusaiti, iwe unofanirwa kurega kutora mifananidzo ine dhimbedzero yedunhu (EXIF GPS) yakabatanidzwa. Vashanyi vepanzvimbo ino vanogona kutora uye kubvisa chero dunhu renzvimbo kubva pamifananidzo pawebsite.
Kana iwe uchisiya mavoti pane site redu iwe unogona kusarudza-kupinda kuchengetedza zita rako, kero ye email uye webhusaiti mukiki. Izvi ndezvenzira yako kuitira kuti iwe usafanira kuzadza zvaunofungazve kana iwe uchibva kune imwe mhinduro. Aya makiki achagara kwegore rimwe chete.
Kana iwe ukashanyira peji redu rekupinda, isu tichaisa cookie yenguva pfupi kuona kana bhurawuza yako inogamuchira makuki. Kuki iyi haina data yemunhu uye inoraswa kana iwe ukavhara browser rako.
Paunopinda mauri, tichagadzirawo makiki akawanda kuti uchengete ruzivo rwako rwekupinda uye chekuratidza mavara. Kuvhara ma cookie kunotora mazuva maviri, uye chinyorwa chekushandisa majiki anowanikwa kwegore. Kana ukasarudza "Yeuka Me", kuiswa kwako kucharamba kwevhiki mbiri. Kana iwe ukabuda panhoroondo yako, kuvhara kwekiki kuchabviswa.
Kana iwe uchigadzira kana kuparidzira imwe nyaya, imwe cookie ichachengetedzwa mu browser yako. Iyi cookie haina kusanganisira dunhu rega uye rinongoratidzira chivo chekutsvaga kwechinyorwa chawakaronga. Inopera mushure mokunge 1 zuva.
Yakabudiswa zvinyorwa kubva kune mamwe mawebsite
Zvinyorwa panzvimbo ino zvinogona kusanganisira zviri mukati mazviri (semuvhidhiyo, mifananidzo, zvinyorwa, nezvimwewo). Zvinyorwa zvinyorwa kubva kune mamwe mawebsite zvinofanirwa nenzira chaiyo sekuti kana mushanyi akashanyira imwe yewebsite.
Aya mawebsite anogona kutora dhesi pamusoro pako, kushandisa makiki, kuvhara imwe yechitatu yekutsvaga, uye kuongorora kusangana kwako nezvose zvakabatanidzwa, kusanganisira kuongorora kushamwaridzana kwako nehuwandu hwemashoko kana iwe une account uye uri kupinda kune iyo website.
Ndivanaani vatinoshandisa data yako ne
Inguva yakareba sei tichichengetedza data yako
Kana iwe uchisiya mhinduro, mhinduro uye metadata yayo inochengetwa nokusingaperi. Izvi ndizvo zvatinokwanisa kuona nekubvumira chero zvinyorwa zvinotevera zviripo pane kuzvibata mumwero wokuenzanisa.
Kune vashandisi vanyoresa pa webhusaiti yedu (kana pane), tinochengetedzawo ruzivo rwemunhu mumwechete rwavanopa muhuwandu hwemashandisi avo. Vese vashandisi vanogona kuona, kuchinja, kana kubvisa ruzivo rwavo rwemunhu panguva ipi zvayo (kunze kwekuti havagoni kuchinja zita ravo rekushandisa). Vatungamiri vepaIndaneti vanogonawo kuona nekugadzirisa iyo ruzivo.
Ndezvipi kodzero dzaunayo pamusoro pe data yako
Kana iwe uine kero pawebsite ino, kana wakasiya mazano, unogona kukumbira kuti uwane firiji rekutumira kwemashoko ega edu atinenge tabata pamusoro pako, kusanganisira chero dheyo iwe watipa. Iwe unogonawo kukumbira kuti tibvise chero dunhu rega rega ratinenge tabata pamusoro pako. Izvi hazvirevi chero chero dhesi yatinofanira kuichengeta kuti tive nehutungamiri, mutemo, kana kuti kuchengeteka.
Kwatinotumira data yako
Mhinduro dzevashanyi dzinogona kuongororwa kuburikidza nebasa rekuzvidzivirira re spam.
Automated Forex Trading Chiratidzo CTrend FX
Chengeta Yako Crypto Yakachengeteka
Dzidza Nezve Cryptocurrencies
Shandura Yako Crypto Kutengesa
Webhu Kubata uye VPS
Nyorera kuCryptoGator.co kuburikidza neemail
Kupinda email address kuti nokunyora magwaro kuti Blog ichi uye kugamuchira Notifications mapango itsva neindaneti.
Itai 529 vamwe vanyori